uMaharaj ubaliwe kwiqembu le-ICC Champions Trophy
Umjikisi wenxele uKeshav Maharaj, usethole ukubizwa okokuqala kwi-One Day International (ODI) kwiqembu labangu-15 lamaStandard Bank Proteas le-ICC Champions Trophy elimenyezelwe ngoLwesithathu.
Iqembu lizodlala kuma-ODI amathathu ne-England, umdlalo wokuqala uzoba eHeadingley eLeeds ngoMay 24, ngaphambi komdlalo wabo wokuqala kwi-ICC Champions Trophy bedlala ne-Sri Lanka eOval ngo-June 3.
Lomdlali oneminyaka engu-26 ube ne-season enhle yokuqala kwiqembu lamaTest, futhi ufika eqenjini ukunezezela kubadlali abaphosa nge-spin kanye no-Imran Tahir.
uMorne Morkel uzobuyela kwikhilikithi yama-overs amancane emuva kokuphuthelwa cishe izinyanga ezingu-10, okuletha isipiliyoni kubadlali abaphosa nge-pace, kanye noKagiso Rabada, uWayne Parnell, uChris Morris, uDwaine Pretorius noAndile Phehlukwayo.
iConvener of selectors yeCricket South Africa (CSA), uLinda Zondi, uthi abakhethayo bakhethe iqembu elinamandla elizomboza zonke izinhlanganisela kanye nezimo ezikhona ngomcimbi wesishagalombili onamaqembu ayisishagalombili.
“Besisebenza naleliqembu labadlali kuma-season amabili adlulile lapho esigxile khona ekungaguquguquki ekukhetheni,” kuphawula uZondi. “Lokho kuvele ekutheni leliqembu lidlale kanjani esikhathini esidlulile, okubonakale ngokuthi baphumelele kuma-ODI series amathathu elandelana.”
“Sizwa ukuthi sineqembu elimboza noma isiphi isimo esingabhekana naso ohambeni lwethu. Okubaluleke kakhulu, bonke abadlali bayazi futhi bayaqonda ukuthi indima yabo iyiphi futhi nokubaluleka kwabo eqenjini.”
“uKeshav ube ne-season yakhe yokuqala emangalisayo kwiqembu lamaTest futhi ukufakwa kwakhe eqenjini kusinika i-spinner esinamakhono ahlukile futhi nokushaya okujulile. Sibonile ukuthi kubalulekile ukushaya ngasekugcineni kwikhilikithi yama-ODI, lokhu kuzoletha ukumboza uma sikudinga.”
Iqembu lizoya e-England ngoMay 16 futhi bazoqala amalungiselelo ngemidlalo emibili yama-over angu-50 bedlala neSussex neNorthants.
iCSA ihalalisela amaProteas ngokuphumelela eNZ AmaProteas anqoba i-series emuva kokuthi imvula imise umdlalo ngosuku lokugcina u-250 kaMorkel owokukhandleka nokuzimisela Ikhulu likaWilliamson libeka amaBlack Caps ngaphambili uDe Kock uqhube umsila wamaProteas Siningi isikhathi kumdlalo - uAmla uAmla ugqamisa usuku oluguqubele ngokuthola u-50 AmaProteas aqonde ukuqeda ihlobo elinempumelelo engaphezulu uPhilander ujabulela ukubuya kwinkundla emnika inhlanhla uDe Kock uzophuza ukubhekwa ukuqina Ama-wicket asekugcineni ashiya womabili amazwe egculisekile